सांसद गंगा चौधरीको जीवनलिला : श्रीमानलाई पिए बनाएर ‘सौता’लाई दा’स बनाएको खुलाशा ! - Nepali in Australia
सांसद गंगा चौधरीको जीवनलिला : श्रीमानलाई पिए बनाएर ‘सौता’लाई दा’स बनाएको खुलाशा !
September 13, 2021 autherLeaveaComment on सांसद गंगा चौधरीको जीवनलिला : श्रीमानलाई पिए बनाएर ‘सौता’लाई दा’स बनाएको खुलाशा !
काठमान्डौ- भनिन्छ,‘राजनीति गर्ने नेता कार्यकर्ताको व्यक्तिगत जीवन हुँदैन’ । राजनेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद भनेका सार्वजनिक व्यक्तित्व हुन् । उनीहरुको जीवनमाथि जनताको नि’गरानी हुनुपर्छ ।
त्यसैले नेताको विवाह, घर परिवार र छोराछोरीले के गर्छन् भनेर चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ। सञ्चार माध्यममा यस्ता विषय खबरको विषय समेत बन्ने गर्छन्। नेकपा एमालेको राजनीतिमा निकै चर्चित पात्रको रुपमा कहलिएकी सांसद गंगा चौधरी पनि खबरको विषय बनेकी छिन्।
नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रतिनिधि सभा सांसद गंगा चौधरीले दोस्रो विहे गरेर आफ्नै ‘सौता’लाई दा’स बनाएर राखेको खुलाशा भएको हो। सांसद चौधरीले दाङको राप्ती गाउँपालिका ७ बस्ने प्रहरी जागिरे न’न्दलाल चौधरीसंग बिहे गरेकी हुन ।नदलालका २ छोरी र एक छोरा हुँदाहुदै प्रहरीको जागिरको प्र’लोभनमा उनीसंग दोस्रो बिहे गरेको चौधरीमाथि आरोप छ।
दोस्रो बिहे गरेकी गंगा अहिले सांसद भएपछि आफ्नै सौतालाई त’थानाम गा’ली ग’लौज गर्ने घरमा क’मलरी जस्तै बनाएर दा’स बनाएकी छिन्। गंगाकी सौताका छोराछोरी भएको उमेर पनि धेरै भइसकेकाले अन्त बिहे गर्न सक्ने अवस्था छैन त्यही देखेर गंगाले अ’पमानपूर्ण व्यावहार गर्ने गरेको स्थानीबासी बताउँछन्।
प्रहरी सेवाबाट नि’वृत भएका आफ्नै श्रीमान नन्दलाललाई उनले स्वकिय सचिव बनाएकी छिन्। श्रीमान तथा स्वकिय सचिवले प्रहरीबाट आउने पेन्सन रकम समेत पहिलो पत्निलाई नदिने गरेको स्थानियबासी बताउँछन् । अधिकार र समानताको चर्को भाषण गर्दै हिड्ने चौधरीको आफ्नै परिवारमा भने च’रम अ’न्याय रहेको स्थानियबासी बताउँछन्।
कैलालीको तत्कालीन प्रतापपुर गाबिस ६ ख’मारियामा जन्मेकी गंगाले सोही ठाउँकै तुलसी चौधरीसंग बिहे गरेकी थिइन् । त्यतिबेला गंगाले तीन छोराछोरी भएको तुलसीसँग विवाह गरेकी थिइन्। पुर्व सांसद मोहनसिह राठौरको स्वकीय सचिव भएका तुलसीसँग उनले सत्ताको प्र’भावमाकै कारण विवाह गरेको चौधरी नि’कट एक एमाले कार्यकर्ता बताउँछन्।
त्यतिबेला तुलसीले गंगालाई बिहे गरेपछि परिवारमा क’लह म’च्चियो । गंगाले अन्तिममा तुलसीसंग अं’श लिएर केही समय माइतमै बसिन् । तुलसीसंग सम्बन्ध बि’च्छेद भएको वर्ष दिन बित्न नपाउँदै गंगाले फेरी अर्को विवाह गरेकी थिइन्। जा’तिय थरुहट आ’न्दोलनबाट नयाँ श’क्ति हुँदै एमाले प्रवेश गरेकी उनले चु’नावमा नयाँ श’क्ति र एमाले दुवैमा आफ्नो नाम राखेकी थिइन् ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन सांसद चौधरीको मोबाइलन नम्बरमा फोन गर्दा उनले फोन उठाइनन्। को’रोना म’हामारीका बीच चीन सरकारले अनुदानमा दिएको अक्सिजन सिलिन्डर समेत चौधरीको घरमा भेटिएको थियो । उक्त घटनापछि समेत चौधरी निकै वि’वादीत बनेकी थिइन्।
श्रीमानलाई पिए बनाएको हुँ, दा’स बनाएको छैन : सांसद चौधरीयसैबीच श्रीमानलाई पिए र सौतालाई दा’स बनाएको आरोप लागेकी नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरीले आफूमाथिको आ’रोप गलत भएको बताइन्। ‘तपाईं मेरो घरमा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ ।
मैले मेरो दिदिलाई कति सम्मान गरेर राखेको छु । मेरो श्रीमानलाई पिए किन राखेको भने उहाँको तलबबाट ५ जना बा’लबालीकालाई निशुल्क शिक्षा दिएको छु,’ चौधरीले भनिन्, ‘दा’स बनाएर ब’सेको भन्ने कुरा ग’लत हो । मेरो च’रि’त्र ह’त्या भयो ।
यो समाचार ह’टाइदिनुस्।’ सांसद चौधरीले समाचार ह’टाइदिन आग्रह गरेपनि सञ्चारकर्मीले प्रेस काउन्सिल आ’चार सं’हिता अनुसार कुनै पनि समाचार ह’टाउन नमिल्ने बताएपछि उनले फोन का’टिन्। दियो पोस्ट
साउथ स्टार सामन्था र नागा चैतन्यको वैवाहिक सम्बन्ध संकटमा, डिभोर्सको तयारीमा
महङ्गो भयो भान्सा: दाल र तेलको मुल्य सोच्नै नसकिने गरी बढ्यो
साउदी सुल्तानकी श्रीमती र छोरीको प्यास मेटाएर काठमाडौमा साढे तीन तले घर !
नायिका पूजा र आकाशको यो भिडि योमा के छ त्यस्तो ? हाल्ने बित्तिकै भाइरल बन्यो हेरौ केही रमाइला (भिडियो सहित)
अर्को उपयुक्त जिम्मेवारी दिइए राजीनामा दिन तयार छु : हितेन्द्रदेव शाक्य
August 4, 2021 auther